Hhayi Yebo Hhayi Nomaphi Nomaphi, I-Ecology Ngaphezu Konke
Phila, njengoba besho, kahle, nokuphila komgwaqo kungcono kune-ecology enkulu
Yebo, yebo hhayi yonke indawo. I-Krasnoyarsk yidolobha eliyinkimbinkimbi yezemvelo. Imishini yemishini, amafemu. Ukuthola umoya ohlanzekile udinga ukushayela okungenani amakhilomitha angu-60.
Isifunda sase-Emelyanovsky kubhekwa njengomunye wemvelo enobungane kakhulu. Ngenxa yemimoya yama-wind, i-exhausts kanye nokukhishwa kwamanzi kuyaphambana nendawo. Yingakho abaningi becabanga ukuthi le ndawo iyona enhle kunazo zonke zokuphila kwezwe. Esikhathini esidlule, izidakamizwa zendawo zakhiwe izikhulu, namuhla indlu esendaweni yase-Emelyanovsk iyatholakala kuwo wonke umuntu. Into esemqoka ukukhetha idolobha elifanele. "I-Golden Hill" inqoba ngokuqinisekile: inkampani yendawo yokuhlala engu-4 itholakala ngqo lapho.
Lapha, ithonya lamabhizinisi ezimboni cishe lizwa. Ukuba khona kwehlathi kuhlinzeka "ukuvikelwa" kulabo abakhetha ukukwakha indlu phansi esifundeni sase-Emelyanovsk. Phela, akukhona nje kuphela ukukhishwa okulimazayo, kodwa futhi futhi udoti olufuywayo lwasekhaya. I-Krasnoyarsk iholele ngokuvumelana nenani lemoto ngayinye. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi isifunda sikhethwe ukuba sibe nomngane wemvelo, sikhethwe kahle.
Ngaphezu kwalokho - ochwepheshe bathi - ngesimo somuntu, ngokuphambene nalokho, kunamathuba amaningi kakhulu kunendlu evamile yendabuko eyisishiyagalolunye. Indlu enamapulangwe ekhwalithi inikeza ukujikeleza komoya, ukuhlanzeka nokuhlelwa kwemvelo. Kanye nobuchwepheshe besimanje, le ndlu iyona enamandla kakhulu futhi ihlanzekile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuhlala kuphela emhlabathini, ungadla ukudla okutshalwe yiwe ngokwakho, ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali anobungozi. Iningi labantu abaphuma edolobheni ngokuzenzakalelayo bashintsha ekudleni okunempilo akhulile engadini yabo. Lapha ungakwazi ukuhlanza udoti, ukuqapha ukuhlanzeka kwekhaya lakho, futhi ungencike emsebenzini wezinsizakalo zomphakathi nokuhlanzeka komakhelwane bakho.
Yingakho izindawo zokuhlala ze "Zolotaya Gorka" ziyisisombululo esiphumelelayo hhayi nje kuphela ngezinkinga zezindlu, kodwa futhi nezinkinga zokunethezeka, nokuphila okunomsoco ngaphandle kwedolobha. Ukuhlala endaweni enhle, ungahlala uqiniseka ngempilo yakho kanye nempilo yabathandekayo bakho. Phela, ubungane bemvelo ngumunye wezinto ezibalulekile zokuphila okunethezeka.
Iminyaka eminingana, inkampani ethi "Zolotaya Gorka" isiza abantu baseKrasnoyarsk ukuthi baqaphele iphupho labo eliyigugu - ukuqala ukuphila ezweni labo. Ukukhethwa kwamadolobhana amakhulu, ingqalasizinda ezithakazelisayo nezicebile, indawo elula, isevisi enhle kakhulu nesimo sengqondo esisha kumakhasimende ayo kwenza "i-Golden Hill" ingenye yabadlali abaluleke kakhulu emakethe ye-suburban real estate eKrasnoyarsk.
Okubalulekile impumelelo yenkampani kuboniswa ngokunembile ngomcabango owodwa olula: "Izwe lezindlu lithengekayo". Inkolelo yokuthi ungakha indlu evulekile futhi ethokomele ingenxa yemali eningi esikhathini esidlule. Futhi "i-Golden Hill" ifakazela lokhu, okwenza isiphakamiso esiyingqayizivele emakethe yaseKrasnoyarsk wezindlu zasemadolobheni. Indlu emadolobheni ezinkampani "i-Golden Hill" akuyona nje isiqephu somhlaba, nebhokisi. Lena ingqalasizinda ehlotshisiwe, insizakalo yekhwalithi futhi njalo inikezelo enenzuzo. Iziqephu ezinkontileka ezivela "Golden Hills" zisho ugesi, umthombo ngepompi kagesi, ucingo namasango, ukubhekwa kwevidiyo, i-intercom, ukuphepha, imigwaqo enqanyuliwe. Izindleko zokwakha akulona "ezingenalutho" amamitha square. Lokhu kuyiphetho ehlanzekile neyinkimbinkimbi, ukuthungatha, ubuchwepheshe bokubhalisa ukwakha indlu, ukuphepha nokunethezeka.
Enye yokuhlanganisa - "i-Golden Hill" ayikuthinti ekukhetheni izinto nezinto zokusebenza ekhaya. Ungafaka indlu oyifunayo. Le nkampani inokuhlangenwe nakho okukhulu ekwakhiweni kwezinhlobonhlobo zezindlu nokugeza okuvela emahlathini asendle kuya ezitini.
Futhi ingxenye ebaluleke kunazo zonke emcabangweni we "Golden Hill" yithuba lokuxoxa nokuhlanganisa izindlela zokukhokha. Iklayenti ingakwazi ukukhetha njalo phakathi kwezitolimende zokuthenga umhlaba nokwakha indlu, ukusebenzisa inkokhelo esekelwe ukwakha, izinhlelo zokuboleka imali. Isikhundla sabaphathi ngokuphathelene neklayenti sinemibandela futhi sinomusa.
Ngokulinganiselwe, lezi zimfanelo zinikeza ubuhlobo obuyingqayizivele obakha phakathi kweklayenti nenkampani. "I-Golden Hill" ithandwa ngokufudumala okukhethekile, ubuqotho ebuhlotsheni kanye nesifiso sokwenza impilo yasemadolobheni ifinyeleleke kuwo wonke umuntu. I-ecology ingaphezu kwakho konke
Kungenzeka yini ukuthi uchithe izihlahla phakathi nezimbali noma kungcono ukuthi ungenzi lokhu?
Imishini yokuhlanza: Thenga iPump for Bowers
I-Alissum: ukulima kulula, kodwa ukusetshenziswa kukhulu
"Injabulo Anyuta": nabalingisi melodrama ngokuthinta
Apricot ugologo: izindlela eziningana
Ukuqomisana, Ubudlelwano kanye amaqembu yangasese
Uyini ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu?
Kungenzeka yini ukunikeza "Meksidol" ingane?
Umlobi Lavrenev Boris: Biography, lokusungula, isithombe
Okokucima umlilo: idivayisi iphinde Umgomo we operation. Iyini injongo hydrant umlilo?